महिलाले पतिसँग सधै किन लुकाउने गर्छन यी ६ वटा कुराहरु ? « Name of Truth News : News Portal in Nepal
महिलाले पतिसँग सधै किन लुकाउने गर्छन यी ६ वटा कुराहरु ?
प्रकाशित मिति : २०७८, असार, १३, आईतवार २१:३८
भनिन्छ, विवाह पछि वा सम्बन्धमा रहदा कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन् तर महिला वा पुरुष दुवैले केही विषय भने आफ्ना साथीसँग सेयर गरेका हुँदैनन् । जतिसुकै खुला वा मिल्ने भएपनि केही कुराहरु राज कै रुपमा राखिएको हुन्छ । भर्खरैको एक अनुसन्धानले महिलाहरुले आफ्ना पति वा ब्वाईफ्रेण्डसँग सेयर नगर्ने केही कुराका विषयमा उजागर गरेको छ । महिलाहरुले लुकाउने कुरामध्ये केहीले आश्चर्यमा समेत पार्न सक्छ ।
भारतको टाइम्स अफ इण्डियामा छापिएको रिपोर्टमा महिलाले पतिलाई अति नै इज्जत र प्रेम गरेपनि पुरानो प्रेम सम्बन्ध भएकाहरुले पतिको तुलना एक्स ब्वाईफ्रेण्डसँग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर यो विषयमा भने पतिलाई कहिल्यै सेयर नगर्ने सो रिपोर्टमा उल्लेख छ । आमरुपमा महिलाहरुले पतिलाई आफ्ना पुराना कुराहरु नसुनाउने र लुकाएरै राख्ने गरेका पाइएको छ । कतिपय पुरुषहरुले अतितका विषयमा जान्न खोज्दा महिलाहरुले कुनै न कुनै उपाय लगाएर कुरा मोड्ने वा टार्ने गरेको अध्ययनका क्रममा सहभागीहरुले बताएका थिए ।
यस्तै भारतीय महिलाहरुले सासुसँग भएको विवाद पनि पतिसँग लुकाउने गरको पाइएको छ । उनीहरुले पतिले आफ्नो आमाको पक्षमा लागेर सम्बन्ध नै बिग्रिने हो भन्ने चिन्ताले यो कुरा लुकाउने बताएका थिए । यस्तै माइतपट्टीको बराबरी माया दिन नसक्ने भएपनि महिलाहरुले घरपट्टीकालाई देखाउनकै लागि मात्रै माया गर्ने गरेको पाइएको छ । महिलाहरुले पनि घरमा माइतमा जस्तो माया नपाएको अनुभव गर्ने गरेका छन् । यस्तै भारतीय महिलाहरुले फिजिकल रिलेसनसिपका विषयमा पनि कुरा लुकाउने गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा पहिरोमा परेर १३ जनाको मृत्यु
डडेल्धुरामा खोलाले बगाउँदा एक महिलाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, ३, बुधबार १९:४३
बैतडी वर्षाका कारण बैतडीका विभिन्न ठाउँमा स्थानीयका घर भत्किएका छन् । जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिका-४ स्थित राजेन्द्र खत्रीको दुई तले घर र वडा-६ स्थित हरिसिंह धनाडीको दुई तले निर्माणाधीन पक्की घर भत्किएका छन् । घर भत्किएपछि अहिले उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई आवासका लागि समस्या भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र महताले बताए ।यसैगरी जिल्लाको पुर्चौडी नगरपालिका-६ त्रिकालीमा एउटा घर पहिरोमा पुरिएको छ । पहिरोमा परी स्थानीय वसन्ती साँउदको घर पुरिएको नेकपा एमाले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-१ समन्वय समितिका संयोजक कर्णबहादुर कुँवरले बताए ।
पहिरोमा घर पुरिँदा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र सरसमानसहित पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको बताइएको छ । यसैगरी दशरथचन्द नगरपालिका-४ जर्गमा रहेको तारादत्त पाण्डेयको घर आंशिक पुरिएको छ भने सोही गाउँका अकबर मालको गोठ पहिरोमा पुरिएको छ ।
जिल्लाको मेलौली नगरपालिका-३ को पुजारा गाउँका गौरसिंह भाटको पसलमाथिबाट आएको पहिरोले पसल पुरिँदा २० हजार रुपैयाँ बराबरका मालसामान नष्ट भएको स्थानीय नरीराम पार्कीले बताए । सोही ठाउँका दानीराम पार्कीको घरमाथिबाट पहिरो खस्दा दानीरामकी श्रीमती मानमती घाइते भएकी छन् । यसअघि शिवनाथ-६ मा मंगलबार एउटा घर भत्किँदा तीन जनाको ज्यान गएको छ भने सुर्नया-५ मा घर भत्किँदा एक जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाको सिगास-५ ढुंगाडमा पहिरोले स्थानीयका पाँचवटा घर पुरिएका छन् ।
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, ३, बुधबार १९:३४
गौरीगंज( १ का किसान हरिप्रसाद श्रेष्ठले चार बिघा क्षेत्रफलमा धान खेती लगाएका थिए । कतै धान पाक्न सुरु भएको थियो, कतै पसाउन सरु भइसकेको थियो । तर, बेमौसमी अविरल वर्षाले उनको धान खेती सखाप पार्‍यो ।
धानमा अहिले कन्काई माई नदीको ठूलो भङ्गालो कुदिरहेको छ । ‘अब त धान घरमा भित्र्याउने आस छैन । धानबालीमा नदी कुदिरहेको छ । यस्तो देख्दा कसको मन मान्छ र रु’, उनी भन्छन्, ‘किसानलाई सधैँ समस्या । जसरी पनि किसानलाई नै समस्या हुन्छ ।’
धान पाक्ने बेलामा यसरी सखाप हुने उनले कल्पना नै गरेका थिएनन् । ‘हामी सधैँ माई नदीका बाढीपीडित हौँ । अरू बेला धान रोप्ने बेलामै बाढीले खेत बगाउँथ्यो । यस पटक धान त मजाले रोप्न पायौँ’, उनी भन्छन्, ‘कात्तिकमा त कल्पना नै गरेका थिएनौँ । यस्तो के भएका होला रु अचम्ममा छौँ । असार(साउनमा नआएको बाढी कात्तिकमा आएर पाक्न लागेको सबै धान लगिदियो ।’
गौरीगंज( १ का भगतलाल राजवंशीले एक बिघा क्षेत्रफलमा ऋण गरेर खेती लगाएका थिए । धान फलाएर बेचेर तिर्ने शर्तमा खेतीका लागि लिएको २० हजार रुपैयाँ ऋण अझै उनको थाप्लोमा छ । तर, धान बेचेर ऋण तिर्ने उनको सपना चकनाचुर भएको छ । उनले ट्याक्टर लगाउन, रासायनिक मल खरिद गर्न र जनमन लगाउन ऋण लिएका थिए ।
‘ट्याक्टरलाई त धान उठाएर दिने भन्ने शर्त थियो । जनमन र मलको खर्चचाहिँ ऋण लिएर तिरेँ’, उनी भन्छन्, ‘अब कसरी ऋण तिर्ने रु भएको धान खेत बगर भयो । हाम्रो त वर्षभरि खाने मेलो नै यही खेत हो । अब एक कसरी जीवन चलाउने होला र ?
जिल्लामा अधिकांश ठाउँमा धानबाली नष्ट भएको छ । कतै पाक्ने अवस्थामा त कतै पसाउन लागेको धानमा ठूलो क्षति पुगेको हो । पाक्न लागेको धान पानीमा डुबेको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र झापाका अनुसार यस वर्ष झापामा ८७ हजार ५०० हेक्टरमा धान खेती भएको थियो । ५० प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञानकेन्द्र झापाका प्रमुख नीलकमल सिंहले जानकारी दिए । खेतमा अझै केही दिन धान डुबे कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए ।
‘केही धान त पाक्ने अवस्थामा थियो । धेरै धान लडेको छ । अब यो उठाउन संभव छैन । ५० प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको छ । विवरण संकलन गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बिउका लागि त अब यो धान काम लाग्दैन । पानी जमेको खेतलाई सुख्खा बनाएर डुबेको धान सुकाउन सके खाद्यान्नका लागि काम लाग्न सक्छ ।’धानबालीबाहेक कृषकले लगाएको सागसब्जीमा समेत बेमौसमी वर्षाले असर पारेको ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ ।